19 Afei Pilato faa Yesu kaa no mpire.+ 2 Ɛnna asraafo no de nsɔe nwenee abotiri de bɔɔ ne ti, na wɔde atade nguguso kɔkɔɔ hyɛɛ no;+ 3 na wɔbaa ne nkyɛn bɛkae sɛ: “Asomdwoe nka wo, Yudafo Hene!” Afei wɔbobɔɔ n’asom.+ 4 Na Pilato fii adi bio kɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Hwɛ! Mede no refi adi abrɛ mo na moahu sɛ minhu ne ho mfomso biara.”+ 5 Enti Yesu fii adi bae a nsɔe abotiri no bɔ no na atade nguguso kɔkɔɔ no nso hyɛ no. Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Hwɛ! Onipa no ni!” 6 Nanso bere a asɔfo mpanyin ne asomfo no huu no no, wɔteɛɛm kae sɛ: “Bɔ no asɛndua mu! Bɔ no asɛndua mu!”+ Pilato ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo ankasa momfa no nkɔbɔ no asɛndua mu, na me de, minhu mfomso biara wɔ ne ho.”+ 7 Yudafo no buaa no sɛ: “Yɛwɔ mmara,+ na sɛnea mmara no kyerɛ no, ɛsɛ sɛ owu, efisɛ ɔfrɛɛ ne ho Onyankopɔn ba.”+ 8 Afei bere a Pilato tee saa asɛm no, osuroe paa; 9 na ɔkɔɔ amrado aban mu hɔ bio, na obisaa Yesu sɛ: “Wufi he?” Nanso Yesu amma no mmuae biara.+ 10 Ɛnna Pilato bisaa no sɛ: “Wummua me?+ Wunnim sɛ mewɔ tumi sɛ migyaa wo na mewɔ tumi nso sɛ mebɔ wo asɛndua mu?” 11 Yesu buaa no sɛ: “Sɛ wɔamfa amma wo amfi soro a,+ anka worennya me so tumi biara. Ɛno nti na onipa a ɔde me maa wo no bɔne sõ paa no.” 12 Enti Pilato kɔɔ so hwehwɛɛ ɔkwan a ɔbɛfa so agyaa no. Nanso Yudafo no teɛɛm kae sɛ: “Sɛ wugyaa onipa yi a, na wonyɛ Kaesare adamfo. Onipa biara a ɔyɛ ne ho ɔhene no kasa tia Kaesare.”+ 13 Enti Pilato tee saa asɛm no, ɔde Yesu fii adi, na ɔtenaa atemmu agua so wɔ baabi a wɔfrɛ hɔ Abo-Nsɛwee, nea Hebri mu wɔfrɛ no Gabata no. 14 Saa bere no na wɔreboaboa+ wɔn ho ama twam no; na ɛbɛyɛ owigyinae. Na ɔka kyerɛɛ Yudafo no sɛ: “Hwɛ! Mo hene ni!” 15 Nanso wɔteɛteɛɛm sɛ: “Fa no kɔ! Fa no kɔ! Bɔ no asɛndua mu!” Pilato ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Memmɔ mo hene asɛndua mu?” Asɔfo mpanyin no buae sɛ: “Yenni ɔhene biara sɛ Kaesare.”+ 16 Afei ɔde no maa wɔn sɛ wɔnkɔbɔ no asɛndua mu.+ Ɛnna wɔfaa Yesu kɔe. 17 Na bere a ɔno ankasa sõ asɛndua no,+ ofii adi kɔɔ baabi+ a wɔato din Tikora a wɔfrɛ hɔ Golgota wɔ Hebri mu;+ 18 na ɛhɔ na wɔbɔɔ no asɛndua mu+ a na nnipa baanu ka ne ho, obiako wɔ ɔfã ha ɛnna obiako wɔ ɔfã ha, na Yesu wɔ mfinimfini.+ 19 Pilato kyerɛw asɛm bi nso fam asɛndua no ho. Ɔkyerɛwee sɛ: “Yesu Nasareni, Yudafo Hene no.”+ 20 Enti Yudafo no bebree kenkanee asɛm yi, efisɛ na baabi a wɔbɔɔ Yesu asɛndua mu no bɛn kurow no,+ na wɔkyerɛw no Hebri, Latin, ne Hela kasa mu. 21 Nanso Yudafo asɔfo mpanyin no ka kyerɛɛ Pilato sɛ: “Nkyerɛw sɛ ‘Yudafo Hene,’ na mmom kyerɛw sɛ ɔno na ɔkae sɛ, ‘Mene Yudafo Hene.’” 22 Pilato buae sɛ: “Nea makyerɛw no, makyerɛw.” 23 Afei bere a asraafo no bɔɔ Yesu asɛndua mu no, wɔfaa n’atade nguguso kyɛɛ mu anan, na ɔsraani biara faa biako, ɛne n’atade nhyɛase no. Nanso na atade nhyɛase no nni mpamee, na na wɔanwene fi soro besi fam.+ 24 Enti wɔkeka kyerɛɛ wɔn ho sɛ: “Mommma yennsunsuane mu, mmom momma yɛmmɔ so ntonto nhwɛ nea ɛbɛyɛ ne dea.” Eyi baa saa na ama kyerɛwsɛm no aba mu sɛ: “Wɔkyekyɛɛ me nguguso mu fae, na m’atade nso, wɔbɔɔ so ntonto.”+ Na asraafo no yɛɛ eyi ampa. 25 Ná ne maame+ ne ne maame nua, afei Klopa yere Maria,+ ne Maria Magdalene gyina asɛndua no ho.+ 26 Afei bere a Yesu huu ne maame, na ohuu osuani a ɔdɔ no+ no sɛ wogyina hɔ no, ɔka kyerɛɛ ne maame sɛ: “Ɔbea, hwɛ! Wo ba!” 27 Afei ɔka kyerɛɛ osuani no nso sɛ: “Hwɛ! Wo maame!” Na efi saa bere no, osuani no de no kɔɔ ɔno ankasa fie. 28 Eyi akyi, bere a Yesu hui sɛ biribiara aba awiei no, nea ɛbɛyɛ na kyerɛwsɛm no aba mu no ɔkae sɛ: “Osukɔm de me.”+ 29 Na ade bi si hɔ a nsa nyinyanyinya ayɛ no mã. Ɛnna wɔde sapɔw a nsa nyinyanyinya no ahyɛ no mã tuaa sommɛ ano de kaa n’ano.+ 30 Afei bere a nsa nyinyanyinya no kaa Yesu ano no, ɔkae sɛ: “Asa!”+ na osii ne ti ase gyaa ne honhom mu.+ 31 Na ɛyɛ Ahoboaboa+ bere, na nea ɛbɛyɛ na Homeda no bedu na amu no nsɛn asɛndua no so+ (efisɛ na saa Homeda no yɛ homeda kɛse)+ nti, Yudafo no srɛɛ Pilato sɛ ɔmma wommubu wɔn nan mu na wonyi amu no mfi hɔ. 32 Enti asraafo no bae bebubuu onipa a odi kan no nan mu ne nea ɔka ho a wɔbɔɔ ɔne no asɛndua mu no nso de mu. 33 Na woduu Yesu nkyɛn a wohui sɛ wawu dedaw no, wɔammubu ne nan mu. 34 Nanso asraafo no mu biako de peaw wɔɔ ne mfe+ na ntɛm ara mogya ne nsu fi bae. 35 Nea ɔde n’ani hui na wadi adanse yi, na n’adanse no yɛ nokware, na saa onipa no nim sɛ ɔka nokware na ama mo nso moagye adi.+ 36 Nokwasɛm ne sɛ eyinom sii na kyerɛwsɛm no aba mu sɛ: “Wɔremmu ne dompe biako mpo mu.”+ 37 Afei nso kyerɛwsɛm foforo ka sɛ: “Wɔbɛhwɛ Nea wɔde ade wɔɔ no no.”+ 38 Afei, eyinom akyi no, Yosef a ofi Arimatea, a na ɔyɛ Yesu suani nanso Yudafo no ho suro+ nti ɔyɛe wɔ kokoam no, srɛɛ Pilato sɛ ɔmma ɔmfa Yesu amu nkɔ; na Pilato maa no kwan.+ Ɛnna ɔbɛfaa amu no kɔe.+ 39 Nikodemo a bere a edi kan no ɔbaa ne nkyɛn anadwo no nso de kurobow ne pɛprɛ mfrafrae bɛyɛ nkaribo ɔha bae.+ 40 Enti wɔfaa Yesu amu no de nwera a aduhuam no wom kyekyeree+ no sɛnea Yudafo afunsie ho amanne te. 41 Ná turo bi wɔ baabi a wɔbɔɔ no asɛndua mu no, na na ɔda foforo+ a wɔmfaa obiara ntoo mu da wɔ turo no mu. 42 Ɛhɔ na Yudafo no ahoboaboa+ nti, wɔde Yesu kɔtoe, efisɛ na ɔda no bɛn.